Hawlaha la isku dardaray waxay ka duwan yihiin Microstation iyo AutoCAD. Waayo, Microstation, waxaa qabta sida files la unugyada kordhin .cel yeedhay, waxaan maqlay in sidoo kale iyaga ugu yeedho unugyada. Haddii ay dhacdo AutoCAD, waaxyaha waa faylasha feylalka ee lagu magacaabo xarunta naqshadeynta; iyadoon loo eegin magaca, weli waa kooxo ...
Haddii aad raadinayso AutoCAD gacanta, waxaa jira fursado badan, laakiin mid ka mid ah ugu wanaagsan ee aan helay waa in, in kasta oo uu yahay, waayo version 2007 ah, hoos ku waa link a si version 2008 ah, waxaad ka arki kartaa muuqaalada cusub ee AutoCAD 2008 halkan. Buugani wuxuu leeyahay faa'iido leh in uu ku qoran yahay Isbaanish waana mid aad u liidata ...
Haddii aan ogaan lahaa boggan toban sano ka hor, waxaan ku badbaadin lahaa waqti badan oo aan ku sameeyn lahaa kooxo si tartiib tartiib ah u sameynaya ururinta qaaska ah. Sidaa daraadeed waxa ugu fiican ee aan sameyn karo waa la wadaag bogga aad ka heli kartid dhismooyin ku dhawaad ​​noocyada kala duwan ee dhismaha iyo injineernimada. Bogga ...
Boggii hore Page 1 ... Page 12 Page 13 Page 14